Tutorials uye Manuals eiyo iPhone | Nhau dzePhone (Peji 3)
Zvidzidzo uye zvinyorwa
Maitiro ekuwana kudzvinyirira kudzora kweyakavakirwa-mukati USB mune iOS 12
Iyi nyowani yekumisikidza yeIOS inotadzisa kupinda kune Mheni chiteshi kuburikidza ne USB tambo, aya ndiwo maitiro atinogona kuwana yayo yekumisikidza menyu
Aya ndiwo maitiro aunowana iwo mafoto gallery kubva kuMessage application muIOS 12
Tinoenderera mberi kuyedza iOS 12 kuti ndikuudze zvese zvitsva, uye nekudaro foto gallery inowanikwa kubva kuMessage application muIOS 12.
Iyo iOS 11.4.1's Nyowani Yakatemerwa USB Mode Inoshanda
Iyo nyowani inorambidzwa USB mode yeIOS 11.4.1 chiyero chinosimudzira chengetedzo ye iPhone yedu nePad
Kudzoreredza, mhinduro yakanakisa yekudzosera mafaera akadzimwa
Kana yedu memory kadhi, hard disk, USB tsvimbo ... yamira kushanda uye isu tinoda kutora mafaera aivamo, neRecoverit zvinogoneka.
Maitiro ekutumira iwo matsva Ekuita zvimiti kubva kuMessage muIOS 12
Isu tinoziva kuti tinogona kutumira iMessage stickers pane iyo iPhone, iPad uye iPod touch, asi nekusvika kweIOS 12 ...
Kutadza kupinda mukati PUBG? Aya ndiwo maitiro ekugadzirisa
Isu tinotsanangura matanho aunofanirwa kuteedzera kuti utangezve PUBG apo iko kunyorera kuri kupa matambudziko nenzira inokurumidza uye yakapusa nzira.
Ungachinja sei kana kuti usimise SIM kadhi PIN muIOS 12
Mune Actualidad iPhone isu tinoda kukuratidza neiyi dzidziso kuti ungamise sei kana kushandura PIN yeSIM kadhi yako pane yako iPhone kana iPad neIOS 12.
Maitiro ekuita kuti meseji dzese dziwiriridzwe pamidziyo yedu
Kana iwe uchida kuve nekwaniso kune ese mameseji mameseji kana iMessage iyo yaunogashira pane yako iPhone, saka tinokuratidza isu maitirwo atingaite basa iri.
Maitiro ekumisikidza iyo yekushandisa yekushandisa muganho muIOS 12
Kana iwe uchida kutanga kuseta miganho pamashandisiro aunoita zvimwe zvinoshandiswa, heino maitiro ekuzviita.
Nzira yekugadzirisa GPS nzvimbo yekukanganisa muIOS 12
iOS 12 iri mune yayo yechipiri beta uye yechitatu kuburitswa haitarisirwe mumazuva mashoma anotevera. Zvisinei…
Apple inotidzidzisa kutora mifananidzo yenhabvu (uye mimwe mitambo, hongu)
Apple yakaburitsa mavhidhiyo mashanu eakateedzana "Sei kupfura pa iPhone" ("Maitiro ekutora mafoto neiyo iPhone") uye, panguva ino, yaive pachiitiko cheWorld Cup.
Maitiro ekuisa iyo iOS 12 Veruzhinji Beta pane yako iPhone kana iPad
Iyo iOS 12 Veruzhinji Beta yave kuwanikwa uye isu tinotsanangura nzira yekunyoresa kune yepamutemo Apple chirongwa uye kuiisa pane yako kifaa.
Maitiro ekusarudza chaiwo maroni ekutaurisa
Mu iPhone News tinokuunzira chidzidzo chekuti ungasarudze chaiwo maroni ekutaurirana.
Maitiro eku kiya maapplication neScreen Nguva muIOS 12
Chimwe chezvinhu zvakavanzika zvakanyanya izvo zvinosanganisira iyo Screen Nguva modhi iyo inotibvumidza isu kumisa kushandiswa kwemaapplication pane iyo iPhone.
Maitiro ekuDhawunirodha Ringtones kubva ku iPhone pasina iTunes kana Jailbreak
Mune ino dzidziso isu ticha tsanangura maitiro ekurodha kurira kubva ku iPhone pasina iTunes kana Jailbreak, nekukurumidza uye nyore.
Itsva 3D Kubata mapfupi eKamera uye maNotes muIOS 12
iOS 12 inosanganisira itsva 3D Kubata sarudzo senge gwaro scanner kana iyo QR scanner mune maNote uye Kamera zvinoshandiswa.
Aya ndiwo maitiro ekuzivisa ari muIOS 12
iOS 12 yauya nenhau diki uye kugadzirisa. Imwe yeaya anovandudza mashandisiro eruzhinji rwe iPhone yedu asingazvizive, asi zvobva zvave zvakakosha. Iyi ndiyo mamiriro enhau muzviziviso zveIOS 12.
Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 11.4 kuenda kuIOS 11.3.1
Isu tinokudzidzisa iwe kudzikisira chishandiso chine iOS 11.4 kune iyo iOS 11.3.1 vhezheni, nenzira iyi tinogona kuona kuti tinogona kuisa Cydia neiyo Electra chishandiso apo CoolStar inogadziridza.
Gadza yakakwira yekumhanya yemoyo yambiro neako Apple Watch
Apple Watch inokwanisa kuona yakakwira kurovera kwemoyo pane dzimwe nguva iyo isingafanire kukwidziridzwa uye kukutumira yambiro. Pano tinotsanangura maitiro ekuigadzirisa.
Maitiro ekuisa iyo iPhone kurara iwe uchiteerera kuPodcast kana kungoipedza
Iwe unoda kuisa iyo iPhone mune otomatiki kurara iwe uchiteerera kune podcast? Yako iPhone ine iri basa seyakajairwa uye isu tichaona mashandisiro ayo
Maitiro ekudzima zvachose ID yeApple
Kuvanzika kuri kuve imwe yembiru dzekutanga dzemakambani makuru. Ichitevera kuvandudzwa kweData Dziviriro Mutemo, Apple yakawedzera chishandiso chekubvisa Apple ID kwenguva pfupi.
Maitiro ekuwedzera iyo yakazara karenda yeiyo 2018 World Cup muRussia pane yako iPhone kana iPad
Iwe unoda here kuti usarasikirwe kamwechete mutambo weiyo inotevera World Cup muRussia 2018? Isu tinokuratidza maitiro ekuwedzera iyo yakazara musangano musangano kune yako iPhone kana iPad
Nzira yekuziva sei simba rechiratidzo cheWiFi kubva kune iPhone
Iwe unoda kuziva kusimba kwemaWiFi network akakukomberedza zvakadzama uchishandisa iPhone kana iyo iPad? Pano tinotsanangura nzira yekuzviwana kuburikidza nechikumbiro
Maitiro Ekudzoreredza Achangodzimwa Mapikicha pane iPhone
Iwe unoda kupora mapikicha kana mavhidhiyo awakadzima netsaona pane yako iPhone, iPad kana iPod Kubata? Pano tinotsanangura kuti zviri nyore sei kuti vazvidzore
Maitiro ekugadzirisa kuti ndeapi maapplication anokwanisa kutarisana neFace ID pane iyo iPhone X
Mune ino dzidziso tinokudzidzisa maitiro ekugadzirisa kupinda kweFace ID nemaapplication pane iyo iPhone X. Nenzira iyi tichaziva kuti ndeapi maapplication anokwanisa kuwana ino system uye, kana paine kusawirirana, kudzima mukana wekuwana.
IMessage Notices haisi kurira? Izvi zvinogona kuitika kwauri.
Ndanga ndichirwara nembugi kwemakore inotadzisa iMessages kubva kurira kana kundizivisa. Nhasi, pakupedzisira, ini ndawana mhinduro uye ini ndichakuudza nezvazvo.
Nzira yekuwana sei dudziro kana kushandurwa kweshoko mune iOS 11
iOS 11, senge shanduro dzekare dzeIOS, inotipa akateedzana emaduramazwi kuti tizive zvinoreva mazwi neshanduro yavo muchiSpanish
Mashandisiro ekushandisa PUBG 3D Kubata zvinodzora pane iPhone
Muchidzidzo ichi ticha tsanangura mashandiro anoita PUBG 3D Kubata kweiyo iOS uye maitiro ekuzviita nyore.
Maitiro ekuisa girazi rakatsamwa pane yako iPhone X [VIDEO]
Tinokuunzira dzidziso yevhidhiyo maitiro ekuisa yakazara izere girazi rakadzikama pane yako iPhone X, ichikubvumidza iwe kamwe uye zvachose kushandisa yako iPhone X usingatyi kutyora iyo skrini.
Maitiro ekumisikidza manotsi pane iPhone kana iPad nemadheti kana mazita
Zvinyorwa paIOS chishandiso chine simba icho chatinoshandisa zvakanyanya uye muzuva redu zuva nezuva. Ndokusaka zvirimo zvatinogadzira zvinofanirwa kuodha nenzira yakanakisa uye nenzira inonyatsoenderana nezvatinoda.
Maitiro ekuziva mamiriro ewarandi yako iPhone kubudikidza neiyo "Apple Tsigiro» app
Apple inopa app yeIOS -iPhone uye iPad- kubva kuApple Support. Nayo unogona kutarisa garandi yemidziyo yako nekukurumidza uye nyore
Maitiro ekugadzira tsika kudengenyeka pane yako iPhone
Iwe unoda kugadzira yakasarudzika vibration ye iPhone yako uye woigovera kune yakatarwa kutaurirana? Isu tinokudzidzisa iwe nhanho nhanho
Maitiro ekuwedzera ekunamatira kuTeregiramu
Kana iwe wakaneta nekugara uchishandisa zvimiti zvakafanana, muchinyorwa chino tinokuratidza maitiro atingawedzera matsva kuTeregiramu mameseji application.
Maitiro ekugadzirisa uye kudzima kunyoreswa kwakabhadharwa neako Apple account
Apple inokutendera kuti ubhadhare rwechitatu-bato kunyoreswa kubva kune ako madhizaina, nechinyorwa ichi iwe uchadzidza maitiro ekudzora nekuadzima kubva kwavari ese.
Maitiro ekugadzirisa iyo Control Center muIOS 11
Kugadzirisa iyo nyowani yekudzora nzvimbo iri nyore kwazvo neIOS 11, nekuti Apple yakawedzera huwandu hwezvinhu zvatinogona kuratidza kana kudzima nekukurumidza uye nyore.
Bvumira kana kuramba zvakatengwa zve «Mumhuri» neKumbira kutenga
En Familia inotipa nzira yakanaka yekugovana account nemhuri yedu uye mupfungwa iyi tinofanirwa ...
Maitiro ekugonesa kana kudzima otomatiki kupenya pane iPhone kana iPad neIOS 11
Iwe unoda here kumisikidza iyo otomatiki kupenya kweako iPhone kana iPad neIOS 11 uye iwe hauzive kuti bhatani iripi? Pano tinokuratidza kwekuiwana
Maitiro ekuvhura iyo ZIP faira pane iyo iPhone
Tinokuunzira matanho ekuti ukwanise kuvhura faira mune yakadzvanywa .ZIP fomati kubva kune yako iPhone kana iPad, iri nyore uye inokurumidza imwe nzira.
Ini handioni chimwe chigadzirwa muAirDrop, chii chandingaite?
Parizvino isu tese tinofanira kuziva mabhenefiti eAirDrop, asi kune avo vasingazive zvazvinoreva kana ...
Maitiro ekufambisa maapplication zviri nyore neminwe miviri
Zvirokwazvo anopfuura mumwe wenyu anowana kakuvhiringidzika kana iwe uchifanira kuronga kana kupasa kunyorera kweimwe ...
Ungachinja sei Rarama Mifananidzo kiyi pikicha inoratidzwa muIOS Mifananidzo
Kuunza mifananidzo yako kuhupenyu kuri nyore neRarama Photo. Iye zvino, pikicha yakakosha - mufananidzo unoratidzwa mune raibhurari yemapikicha- haukugutsi, chinja icho nyore
Aya ndiwo mashandiro anoita "Bhatiri Hutano", iyo nyowani ficha muIOS 11.3
Isu tinotsanangura mashandiro anoita iyo nyowani "Bhatiri Hutano" maitiro uye izvo chimwe nechimwe chenyika dzakasiyana umo yedu yedu inogona kuwanikwa zvinoreva.
Maitiro ekuvandudza HomePod kune yazvino vhezheni inowanikwa
Mutauri weApple, iyo HomePod, inogamuchirawo zvinogadziridzwa zve software uye isu tinotsanangura danho nedanho maitiro ekuzviisa
Maitiro ekuwedzera kana kubvisa yako kiredhiti kadhi ruzivo kubva kuSafari kuzadza paIOS
Unoda kubvisa kana kuwedzera makadhi echikwereti muSafari "Autofill" ficha pane iOS? Pano tinokusiira iwe yakazara dzidziso kuti uzviite
Maitiro ekuisa muganho wenguva pane iPhone ne iPad
Isu tinotsanangura kuti iwe ungaisa sei muganho wenguva pakushandisa kwekushandisa, chimwe chinhu chinonyanya kubatsira kuvana nemitambo ye iPhone ne iPad.
Nei iyo App yepamba isina Widget uye maitiro ekukurumidza kuwana zvishandiso zvedu
Apple yakagadzira yayo kiyi mukati meControl Center iyo inotibvumidza isu kuwana zvese zvishongedzo kamwechete tarisa, ngatione kuti zvinoshanda sei.
Matanho mana ekuvandudza kuzivikanwa kwechiso kana Chiso ID
Isu tinokurukura humwe hunyengeri hunogona kubatsira Face ID kushanda zvirinani nekuziva kumeso kwako mune mamwe mamiriro
Maitiro ekubvumirana yakawanda nzvimbo muICloud kubva kune iyo iPhone kana iPad
Iko yemahara 5 GB yeICloud Drive haina kukukwanira? Isu tinokuratidza maitiro ekubata yakawanda nzvimbo muICloud kubva kune yako iOS chishandiso (iPhone kana iPad)
Maitiro ekudzima Notices kubva kuMessage kubva kuusingazivikanwe Senders app
Kana iwe wakaneta nekutambira mameseji kuburikidza neMessage kubva kune anotumira isu tinozivikanwa uye tinochengetwa mune yedu ajenda, mune ino chinyorwa tinokuratidza maitiro ekuzvidzivirira.
Vimba unosangana paWhatsApp
Isu tinotsanangura izvo zvaunofanirwa kuita kudzivisa kusangana paWhatsApp. Kana nhamba ichikunetsa uye iwe uchida kuivharira kubva kuWhatsApp kuti irege kukutumira mamwe mameseji, aya matanho aunofanirwa kutevedzera.
Maitiro ekudzima Tsvaga Yangu iPhone
Isu tinokudzidzisa maitiro ekumisa kutsvaga iPhone yangu, chimwe chezvinhu zvakakosha uye zvakachengeteka zvinopihwa neApple kana zvasvika pakudzivirira mudziyo wedu pakubiwa kana kurasikirwa nawo, asi dzimwe nguva tinoda kuimisa kuti titengese nhare, kuigadzirisa kana chero chimwe chinhu.
Maitiro ekudzivirira nzira huru nemitero muMepu ye iPhone yako
Iwe unoda here kudzivirira nzira dzese huru uye mitero panzira dzako nemotokari uye uchishandisa iOS Mepu? Isu tinotsanangura kuti tingazviita sei mumatanho mashoma
Tora mapikicha ako, mafoni kana imwe data kubva ku iPhone nekukurumidza uye nyore neFoneLab
Kwemakore mashoma uye sezvo tekinoroji yashanduka, vazhinji venyu, zvirokwazvo makasiya ...
Akanakisa 3D Kubata mapfupi atinawo paApple Watch
Isu tinokuunzira iwe kushanya kushoma kweanonyanya kufadza 3D Kubata mapfupi paApple Watch, izvo zvinokubatsira iwe kufamba zvakanyanya zvirinani kuburikidza nemushandisi interface
Apple inowedzera maviri matsva emavhidhiyo tuturu ekuvandudza edu ekugona kutora mifananidzo
Iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakatumira maviri mavhidhiyo matsva anotiratidza isu mawaniro atingaita kuwana zvakawanda kubva kune yedu iPhone kamera.
Maitiro ekurasa iyo RAM ndangariro pane iyo iPhone X munzira iri nyore
Tiri kuzokuratidza maitiro aungaite yekudurura RAM ndangariro yeiyo iPhone nematanho mashoma akapusa.
Apple yakaburitsa matatu mavhidhiyo matsva ekukudzidzisa iwe mafoto neiyo iPhone
Apple yakagadziridza chiteshi chayo cheYouTube nemavhidhiyo matatu matsva ayo anotibatsira kuwana zvakawanda kunze kwekamera ye iPhone yedu, zvese zvevhidhiyo nekutora mifananidzo.
Apple inodhinda shambadziro nyowani yakanangana nemufananidzo wemifananidzo
Ivo vakomana veCupertino vakatumira matatu mavhidhiyo matsva pane yavo YouTube chiteshi uko isu patinogona kuona maitiro atinogona kugadzira selfies tichishandisa portrait modhi, maitiro atingavagadzirire uye maitiro ekuwedzera mabhureki mhedzisiro muPamoyo Mifananidzo.
Maitiro ekusunungura kumusoro nzvimbo pane yako iPhone
iOS 11 neWhatsApp zvinotipa maturusi anotibvumidza kuti titorezve yakasununguka nzvimbo yemahara pane yedu iPhone iyo iwe yaunonyatsokoshesa
Maitiro Ekukurumidza Kuongorora App Store Ongororo
Tichakwanisa kuongorora mhando yeongororo dzinosiiwa nevashandisi muApple App
Maitiro Ekutarisa Yako iPhone Bhatiri Hutano Nyore
Ino inguva yekuzivisa neiyi dzidzo pamusoro pekuti isu tinga tarise sei hutano hwebhatiri re iPhone yedu uye kudzora simba reprosesa.
Maitiro ekuvhura munguva pfupi yapfuura tabo yakavharwa muSafari
Muchikamu chino tinokuratidza maitiro atingaitezve matabhu atakambovhara muSafari pane yedu iOS chishandiso, nekukurumidza uye nyore.
Iyo inokurumidza nzira yekugovana yako screenshots
Isu tinokuratidza iyo inokurumidza nzira yekugovana skrini pane iOS kuti usatambise sekondi imwe chete.
Mashandisiro ekushandisa yakavanzika mamiriro ekubhurawuza muSafari uye kujekesa nhoroondo yako
Iyo yakavanzika maitiro eSafari inotibvumidza isu kufamba pasina kusiya trace munhoroondo yedu yekubhurawuza, nhoroondo yatinogona kudzima nenzira yakakodzera kana zvizere kana tisina kumborangarira kushandisa iyi yekubhurawuza maitiro.
Iwe unoshandisa Netflix neyako nharembozha? Izvi zvinokufadza
Iwe unoda kutora shoma data uchishandisa Netflix pane yako iPhone kana iPad? Iine anotevera marongero atinoratidza kuti unogona kuzviita pasina matambudziko
Maitiro ekugadzirisa ekudzora AirPods muIOS 11
Isu tinotsanangura maitiro ekugadzirisa kutonga kweAirPods neIOS 11 inotibvumidza kudzora kutamba nekutepa nhare imwe neimwe.
Maitiro ekuvharidzira peji rewebhu
iOS inotipa inoyevedza yekudzivirira system iyo yatisingakwanise chete kudzivirira kuwana kune ewebhu mapeji, asi zvakare, tinogona kuvharira kupinda kune chero mhando yezvisina kusarudzika zvemukati zvevadiki. Dzidza maitiro ekudzivirira peji rewebhu nedzidziso yedu.
Maitiro ekumisikidza iwo Meseji basa muICloud kubva kune iyo iPhone
Tichakudzidzisa maitiro ekumisikidza mameseji muICloud kubva kune yako iPhone uye nyore, kuti ako mameseji agare aripo.
Maitiro ekuudza kana yako iPhone iri nyowani, yakagadziridzwa, tsika, kana kutsiva
Iwe unoda kuziva kana yako iPhone iri nyowani? Nenhanho shoma dziri nyore kuburikidza nemenu yekumisikidza yemhando yako iwe unogona kuziva kana iri iPhone nyowani, yakadzoreredzwa iPhone, kutsiva iPhone kana tsika iPhone
Maitiro ekubvisa makadhi echikwereti kubva ku iPhone yako nyore
Tine chinoshandiswa kuchengetedza yedu yekubhadhara uye kadhi rechikwereti data muIOS, isu tichaenda kukudzidzisa iwe kudzima iyi data.
Maitiro ekuisa iPhone kuti ipindure inofona otomatiki
Pakati pesarudzo dzekuwanika idzo iOS inotipa, isu tine basa rinotibvumira kumisikidza iyo iPhone kuti ipindure zvinofonerwa zvatinogamuchira mushure mekunge nguva yakatarwa yadarika.
Maitiro ekumisa otomatiki kurodha pasi pane ese iOS zvishandiso
Nzira yakanaka yekudzima otomatiki kurodha pasi, tinogona kudzivirira mashandisiro atinotenga pane iyo iPhone, zvakare kurodha pasi pane iyo iPad kana zvinopesana.
Maitiro ekumisa geolocation yemifananidzo isu yatinotora neiyo iPhone
Kana tikabvisa geolocation yekamera ye iPhone yedu, mifananidzo yese yatinotora haichengetedze ruzivo rweGPS yenzvimbo imwe chete chero nguva.
Maitiro ekugadzirisa kukura kwemavara eiyo iPhone yako kana iPad kuti ushande zvakanyanya kugadzikana
Iwe unofanirwa kugadzirisa saizi yemavara eiyo iPhone kana iPad? Pano tinotsanangura kuti sei uye isu tichagadzira nzira pfupi yekuve neyakanakisa marongero
Yako iPhone inochengeta yakazara rekodhi yenzvimbo dzese dzaunoshanyira
Iyo iPhone iri bhokisi rezvishamiso. Waizviziva here kuti iwe unogona kuwana rekodhi yenzvimbo dzichangobva kushanyirwa ne iPhone yako? Tinokutsanangurira iwe
Safari tricks yekufamba zvakanyanya nekukurumidza
Tiri kuzokupa mamwe matipi kuti iwe ugone kushandisa zvakanyanya zveSafari uye uite kuti itarise zvakanyanya nekukurumidza
Maitiro ekuona ako mapassword akachengetwa pa iPhone
Tichakudzidzisa maitiro ekuona nekugadzirisa ako ese mapassword kubva ku iPhone kana iPad yako pazvinenge zvichidikanwa.
Maitiro ekudzivirira sei iPhone kubva kubatanidza kune yakachengetwa Wi-Fi network
Tichakudzidzisa maitiro ekudzivirira iyo iPhone kuti isabatanidze kune yakachengetedzwa yeWi-Fi network kuti usakanganwe password iwe unofanirwa kuibatanidza nekuzvidira.
Maitiro ekuvhara maapplication pane iPhone X
Iyo iPhone X inosvitsa matsva matsva e multitasking uye ekuvhara kunyorera. Isu tinokuudza kuti inoshanda sei uye kuti tingaishandisa sei kunatsiridza mashandiro edhina redu.
IPhone yako inononoka here? Iwo akanakisa manomano ekuvandudza mashandiro
Tichakudzidzisa mashoma mashoma anokurumidza uye akapusa matipi ekunyatso kugadzirisa mashandiro eiyo iPhone yako kuti iwe haufanire kuchinja bhatiri
Maitiro ekugadzirisa zvese zvishandiso zvakapihwa kune yako Apple ID
Tiri kuzokuratidza maitiro aunogona kushandisa yako Apple ID pamwe nemidziyo yakapihwa iyo mumatanho mashoma akareruka ayo achaita kuti iri basa riite nyore sezvinobvira.
Maitiro Ekutora Mapikicha kubva kuI iPhone kuenda Kunze Hard Dhivha Uchishandisa Mac
Iwe unoda kuendesa mapikicha kubva ku iPhone kuenda kune ekunze hard drive? Isu tinotsanangura nenzira yakapusa kuzviita kana iwe uine Apple komputa
Maitiro ekusaina gwaro kubva ku iPhone kana iPad uchishandisa Mail
Kusayina kubva ku iPhone kana iPad kuri nyore kwazvo kana iwe ukatambira gwaro rePDF kubva kuApp application "Tsamba". Pano isu tinokutsanangurira iwe maitiro ekuzviita
Maitiro ekutora screenshots neiyo iPhone X
Dzidziso yekutora screenshots pane iyo iPhone X. Nyore-nhanho-nhanho bhuku rekuita iri nyore asi rakakosha basa. Isu tinokudzidzisawo maitiro ekugadzirisa screenshots, maitiro ekuvagovana navo uye zvimwe zvinhu. Kana iwe usinga zive kutora skrini pa iPhone X, pano tinokuratidza sei !!
Goverana neWi-Fi password mune imwe nguva, chinhu chitsva muIOS 11
Apple yakaronga muIOS 11 system ichatibvumidza kugovana password yeWi-Fi neshamwari dzedu otomatiki, ndiwo mashandisiro ainoita.
Maitiro ekumisikidza traffic mamiriro yambiro muIOS
Tichakuratidza maitiro ekumisikidza nzvimbo dzinowanzoitika uye yambiro mamiriro enzira muIOS kuitira kuti ugare uchiudzwa.
Maitiro ekudzikinura zviri nyore iTunes kana Apple Music makadhi
Iye zvino tava kuzotarisa pane chakakosha chinhu, maitiro aunogona kununura ako Apple Music kana maTunes makadhi kuti uwane zvakanyanya maari.
Maitiro ekurodha pasi kunyorera neiyo iPhone X
Tsvaga maitiro eku dhawunirodha nekutenga kunyorera neiyo iPhone X. Nekuda kwekushayikwa kwebhatani repamba pane iyo nyowani X X, maapplication haasisiri kurodha pasi sepakutanga. Tsvaga zvese zvakadzama!
3 nzira dzekutarisa mamiriro ebhatiri e iPhone yako
Iwe unoda kuziva kuti chii chiri chinzvimbo cheiyo bhatiri re iPhone? Tinokupa nzira nhatu dzekuti uzviongorore wega kubva kumba
Maitiro ekudzoreredza 4-manhamba ekuvhura PIN pane yako iPhone kana iPad
Ko wako 6-digit iPhone kiinura PIN kunetsa? Iwe unoda kudzokera kune iyo 4-manhamba ekuvhura PIN? Pano tinokuudza maitiro ekuzviita
Iwe uri mumwe wevaya vanoisa maapplication senge anopenga uye ivo vanobva vakanganikwa? Zvakanaka, shandisa basa racho kuti rizobvisa mapurogiramu ausingashandisi muIOS 11
Maitiro ekumhanyisa girazi rinosimudza muIOS 11 uye zvairi
Chokwadi iwe unotoziva basa iri kana uri veteran iOS mushandisi uye kubvira kwayakasvika mu ...
Activate otomatiki kudzima kudzima maapplication ausingashandise
Tichadzidza kuti tingaite sei otomatiki kubviswa kweapp neiyi yakapusa dzidziso yeiyo iOS 11
Maitiro ekudzikisira kubva iOS 11.2 kusvika 11.1.2 pasina kurasikirwa nedata
Saka isu tichaenda kukuratidza maitiro aungaite kurodha pasi vhezheni yeIOS kubva iOS 11.2 kusvika 11.1.2 pasina kurasikirwa nedata.
Houdini, chinhu chepedyo kune Jailbreak yeiyo iOS 10.x
Jailbreak yadzoka isu tinopa Houdini, chinhu chepedyo kune Jailbreak chauchazowana cheiyi vhezheni yeIOS, ngatisanganei nazvo.
MaAirPod ako haapfuure 99% kubhadharisa? Maitiro ekuzvigadzirisa
Vamwe vashandisi vataura kuti bhatiri riri muAirPods bhokisi haripfuure 99%, nhasi tirikuratidza maitiro ekugadzirisa iri dambudziko diki.
Maitiro ekufananidza iCloud neGoogle makarenda zviri nyore
Isu tinotsanangura kutsanangudza nenzira yakapusa, pasina kunyorera uye mahara, iCloud makarenda uye Google Calendar
Mashandisiro aungaita YouTube semberi mimhanzi inoridza pane iPhone
Tichakudzidzisa mashandisiro eYouTube kumashure kuti ugone kuterera odhiyo kunyangwe mavhidhiyo asina kutambwa pachiratidziri
Tsvaga iPhone X uye iPhone 8 Plus zviziviso nekukurumidza
Iwe unoda kukurumidza kuwana kune iPhone X notices? Pano isu tinokusiira iwe chidzidzo kuti ubate kamwe chete kuti uwane ivo
Maitiro ekudhawunirodha yakasarudzika iPhone X mapikicha
Kuburitswa nyowani nyowani kweiyo iPhone kazhinji kunouya kuchiperekedzwa nemapikicha matsva, mifananidzo yemifananidzo yakave ...
Maitiro ekutumira mafoto neWhatsApp pasina kurasikirwa nehunhu
Nehunyengeri hwakareruka tichaenda kukuratidza maitiro aunogona kutumira iwo mapikicha neWhatsApp pasina kurasikirwa nechero mhando yemhando.
Isu tinokudzidzisa iwe kushandura iyo Animojis yeiyo iPhone X kuita GIF fomati
Kuburikidza neWebflowflow isu tinokwanisa kushandura iyo Animojis yeiyo iPhone X kuita GIF fomati kuti uzvitumire kune nyika yese pasina matambudziko.
Maitiro ekuisa iyo nyowani iGBA 2.0 emulator pane yako iPhone pasina jailbreak
Iwe unoda kutamba zvekare senge Legend of Zelda, Mario Kart kana Final Fantasy pane chako chishandiso? Unogona kuzviita nekuisa iGBA 2.0 emulator isina jailbreak
Isu tinokudzidzisa iwe kushandisa Siri nekutaipa pane kushandisa izwi rako
Dzidza kushandisa Siri kuburikidza nekhibhodi panzvimbo yezwi, zvinokubatsira iwe kuishandisa munguva dzausingakwanise kutaura zvinonzwika.
Sevha bhatiri pane yako iPhone X nekumisa 'Press kuti uite'
Iwo mashandiro ekumisikidza iyo iPhone X skrini pasina kubata bhatani repadivi bhatani inogona kukanganisa kudyiwa kwebhatiri rako. Isu tinokudzidzisa iwe maitiro ekuvamisa
Ese manomano eiyo iPhone X kuti uwane zvakanyanya mairi
Iyo iPhone X yanga iri shanduko hombe kubvira Apple payakatanga modhi yekutanga yeakakurumbira smartphone ye ...
iOS 11 inosanganisa mabasa matsva senge muturikiri weSiri uyo anotibvumidza kushandura zvinyorwa kubva kuChirungu kuenda kune mimwe mitauro. Kuchave nemimwe mitauro mune ramangwana.
Dzidziso yekuti ungawana sei refu kuratidza mifananidzo ne iPhone, iOS 11 vhezheni uye Rarama Mifananidzo mhedzisiro
Ita zvakanyanya chengetedzo yemidziyo yako neIOS 11
iOS 11 inounza nemaneja wekuchengetedza watinogona kuziva mashandisiro atinoita iyo nzvimbo pane yedu kifaa zvakadzama.
Mashandisiro ekushandisa iyo 'Usanetseke uchityaira' chimiro cheiyo iOS 11
iOS 11 yakawedzera basa idzva: Usavhiringidze paunenge uchityaira. Tinokuratidza nhanho nhanho maitiro ekugadzirisa iyi nyowani sarudzo pane yako iPhone
Maitiro ekuona nhoroondo yekutenga yeApp Store kubva kune yedu iPhone kana iPad
Imwe yemabasa matsva ayo iOS 11 yaanotipa ine chekuita neKutenga Nhoroondo, nhoroondo yatinogona kubvunza kubva kune yedu iPhone
Maitiro ekudzima, kutangazve kana kumutsa iPhone X
Isu tinodzoka nevezvino tutorials, nhasi tiri kuzokuratidza ndedzipi nzira dzekudzima, kutangazve kana kumisikidza iyo iPhone X zvinoenderana nezvaunoda.
Nekusvika kweiyo iPhone X, zvimwe zvezviito zvinozivikanwa mukati meiyo ecosystem yashanduka. Uye chimwe chazvo chiri kuvhara maapp.
Maitiro Ekukurumidza Kuchinja Pakati Pezvishandiso pane iPhone X
Ndinochinja sei pakati pezvishandiso neiyo iPhone X? Ichokwadi ndechekuti Apple inoziva maitiro ekushandisa iyo nyowani mushe zvakanaka, isu tichakuudza.
Maitiro ekutarisa chaiwo iPhone X bhatiri muzana
Chinhu chinonyanya kushamisa nezve iPhone X ndiko kubviswa kweye Kumba bhatani pazasi uye hombe skrini ...
Mashandisiro ekushandisa Face ID pane iPhone X neApple Pay
Iwe uri mumwe wevaya vanoshandisa Apple Kubhadhara mukutenga kwavo uye uchida kuishandisa neFace ID yeiyo iPhone X? Pano tinokuratidza maitiro ekugadzirisa uye ekuishandisa
Maitiro ekutora screenshots pa iPhone X
Uyu ndeimwe yemibvunzo iri nyore kupindura asi kuti kune vazhinji vashandisi vasingazive, zve ...
Ungachinja sei Apple account yako kuICloud.com
Apple pakupedzisira inoita kuti ubatanidze yako iCloud.com account neApple ID yako. Isu tinotsanangura maitiro anoitwa nhanho nhanho nemifananidzo uye mhedzisiro yayo.
Maitiro ekudzima meseji dzeWhatsApp kuitira kuti anogashira arege kuaverenga
Mushure mekuvandudzwa kwazvino, basa rekutumira mameseji rakakurumbira, WhatsApp, pakupedzisira rinokutendera kudzima mameseji kwenguva yakati rebei
WhatsApp ikozvino inobvumidza iwe kudzima mameseji akatumirwa kubva kuiyo iPhone
Tinokuratidza zvinoitwa neizvi zvitsva zveWhatsApp uye nemabatiro aungaita kudzima mameseji awakatotumira kuitira kuti pasave neanogona kuaverenga.
Ndingaite sei kuti ndidzivise iyo Yechokwadi Tone yeiyo iPhone?
Tinoda kukuzivisa iwe kuti ungamise sei iyo Yechokwadi Tone yeiyo iPhone skrini uine mashoma mashoma matanho, ngatiende ikoko pamwe nedzidziso.
Maitiro ekuchinjisa ako epa WhatsApp kutaurirana kune yako nyowani iPhone
Isu tichaenda kukudzidzisa iwe nzira yekuchinjisa yako WhatsApp kutaurirana kune yako nyowani iPhone kuburikidza mashoma mashoma matanho.
Matambudziko ne iPhone yako? Kudzorera kunogona kuzvigadzirisa
Kana vhezheni nyowani yeIOS yasvika, zvinoreva kusvika kwenhau asiwo matambudziko, mazhinji acho anobviswa nekudzosa yako iPhone
Ungachinja sei zvishandiso muAirPlay neIOS 11
Iwe unoda kuziva kuti ungachinja sei damba rekutamba muAirPlay neIOS 11, tinoidzidzisa iwe mune iyo dzidziso yatakugadzirira iwe.
Maitiro ekugadzira GIF pane iPhone
Tichakudzidzisa maitiro ekugadzira GIF mune yakapusa uye inokurumidza nzira pasina kuenda kuPc kuti uzviite.
Maitiro ekudzoreredza edu WhatsApp hurukuro
Unoda kupora WhatsApp hurukuro? Isu tinokuratidza maitiro ekuzviita nhanho nhanho kudzoreredza machats ekare
Maitiro ekuteerera kumahara mimhanzi neTeregiramu pane yako iPhone
Tichakuratidza maitiro aunogona kunakidzwa nenziyo dzese dzaunoda kuburikidza neTeregiramu pasina matambudziko akawandisa uye mahara zvachose.
Isu tinokuratidza diki dzidziso kudzima izvo kunyoreswa kune maapplication nemaFreemium masevhisi kubva kune yako iPhone kana iPad uye kubva iTunes
Nekuda kwebasa nyowani rinowanikwa muIOS 11, tinogona kuwana imwe nzvimbo nepo sisitimu ichitarisira kudzima maapuro acho otomatiki.
Nekuda kwechinhu chitsva muIOS 11, tinogona kudzima zvese iyo iPhone neIpad kuburikidza neIOS Zvimiro pasina kudzvanya bhatani remagetsi
Compress uye decompress Zip mafaera neIOS 11 uye Zip
Kumanikidza uye kudzikisira mafaera neIOS 11 zvave nyore chaizvo uye nekukurumidza nekuda kweiyo Zipped application uye neyekutanga maFiles app.
Mhuri kugovana iCloud kuchengetedza neIOS 11
Isu tinokuratidza maitiro ekugovana yako iCloud yekuchengetera neMhuri yako boka nekukurumidza uye nyore nekutenda kuIOS11.
Maitiro ekutarisa mamiriro ebhatiri rako neaya matanho akareruka
Isu tinokuratidza dzimwe nzira mbiri kuti ukwanise kutarisa mamiriro ebhatiri eedu iPhone kana iPad, pamwe nemhedzisiro yekuchaja yakapera.
Maitiro ekumisikidza iyo Yechokwadi Tone basa reiyo nyowani iPhone 8 ine iOS 11
Dzidza maitiro ekumisikidza nyowani Chokwadi Tone yeiyo iPhone 8 skrini kubva munzira dzese dzinogoneka: iyo yekugadzika app uye iyo iOS 11 inodzora nzvimbo.
Force restarting iyo iPhone 8 inowedzera kuomarara
Iwe unoziva kumanikidza kutangazve iPhone 8? Tsvaga iyo nyowani mubatanidzwa wemabhatani aunofanirwa kudzvanya kuti utangezve yako iPhone 8 kana yakavharwa.
Maitiro ekugadzirisa mameseji ekuwedzera pane iOS
Tinokuunzira ku iPhone Gadziridza dzidziso nematanho mashoma akapusa kuti zviri nyore sei kugadzirisa iyo switch switch yekushandisa yeIOS 11 Meseji.
Isu tichaenda kukuratidze iko iko Siri yekuona kumeso masetwork ari eOSOSOS 4 uye nemabatiro aungaite zvirinyore zvirimo.
Nedzidziso iyi isu tichaenda kupa ongororo yemabatiro ekupfuudza iwo maroni zvakananga ku iPhone kubva iTunes 12.7 kuburikidza ne USB tambo.
Ungashandura sei Mhenyu Mapikicha kuGIF neIOS 11
Kutenda kuIOS 11 tinogona kukurumidza kushandura edu ehupenyu mapikicha kuGIF pasina wechitatu-bato kunyorera
Maitiro ekudzima Kubata ID uye Chiso ID muIOS 11
Iwe unoziva here kuti unogona kudzima Kubata ID uye Chiso ID kumhanya? Mune Actualidad iPhone isu tichaenda kukudzidzisa iwe nenzira yakapusa nzira.
Aya ndiwo mashandiro matsva ewatchOS 4 moyo yekutarisa inoshanda
watchOS 4 inosanganisa mutsva moyo chiyero chekutarisa basa rinozovandudza mashandiro edu uye hutano hwedu
Maitiro ekuenda kubva kuIOS 11 GM kuenda kune yepamutemo vhezheni iri nyore nzira
Kusava nechokwadi kunomuka nekukurumidza patinosvika kuIOS 11 GM, ndingaenda sei kubva kuIOS 11 GM kuenda kune yepamutemo vhezheni? Tinokuratidza kuti ungazviita sei.
Maitiro ekudzimisa otoplay yemavhidhiyo mune nyowani iOS 11 App Store
Muchikamu chino tiri kuzokuratidza maitiro aunogona kudzima otomatiki kutamba kwemavhidhiyo muIOS 11 App Store.
Hapana bhatiri ine iOS 11? Matipi ekuvandudza kuzvitonga
Saka isu tichaenda kukupa iwe akakosha matipi ayo iwe aunogona kuwedzera iyo bhatiri mashandiro e iPhone yako neIOS 11.
iOS 11 inoshandura mashandiro eWiFi neBluetooth
Apple yashandura hunhu hweWiFi neBluetooth mabhatani muIOS 11, uye isu ticha tsanangura mashandiro avanoita kubva zvino zvichienda mberi
Zvaunofanira kuita usati wagadzirisa kune iOS 11
Usati wadzosera kuIOS 11 unofanirwa kuita akateedzana emabasa pane yako iPhone kana iPad. Vazvizive uye unakirwe nenhau dzeIOS 11 pasina njodzi.
Maitiro ekumisikidza iyo AirDrop basa mune iOS 11 pane iyo iPhone uye iPad
Kugonesa iyo isipo AirDrop Kudzora Center chimiro ne iOS 11 maitiro ari nyore kwazvo. Tinotsanangura maitiro kuzviita.
iOS 11 inowedzera nzira yekukurumidza yekuchengetedza data uye bhatiri
Apple yakafunga nezvedu uye yakawedzera muIOS 11 nzira yekuda kuponesa zvakanyanya pane nharembozha, iine mabhatiri ayo anotevera
Sevha nzvimbo pane yako iPhone ne iPad nekuda kweIOS 11
iOS 11 ichatibvumidza kuchengetedza nzvimbo mukati memidziyo yedu nekuda kwesarudzo nyowani dzakabatanidzwa muchirongwa chinozotibatsira kuzviita
Maitiro ekudzimisa AutoPlay muiyo iOS 11 App Store
Tichaona maitiro ekumisa AutoPlay muIOS 11 App Store, mashandiro anotibvumidza kuona mavhidhiyo anodzidzisa nezvemaapp.
Maitiro ekubvisa blur mumufananidzo wakatorwa neiyo iPhone's Portrait Mode muIOS 11
Imwe yeakanakisa maficha ainayo pane iPhone 7 Plus ndeyeMifananidzo Mifananidzo. Nemamiriro aya mushandisi ...
Maitiro ekutumira mavhidhiyo marefu kubva kuWhatsApp uye kwete kuacheka
Maitiro ekutumira mavhidhiyo marefu kubva kuWhatsApp uye kwete kuacheka? Isu tinokuratidza nzira yekutumira marefu mavhidhiyo kupfuura anotitendera WhatsApp.
Ungasunungura sei nzvimbo pane yangu iPhone
Isu tinokuratidza maitiro ekuburitsa nzvimbo pane yako iPhone neaya manomwe manomano ayo achakubatsira iwe kuti uve neyemahara ndangariro pane yako iPhone kana iPad. Wakavaedza vese here?
Maitiro ekuchinjisa mimhanzi kune iPhone isina iTunes
Isu tinokudzidzisa maitiro ekuchinjisa mimhanzi kune yako iPhone pasina kushandisa iTunes, uine dzimwe nzira dzekuisa dzaunofarira nziyo pane yako Apple nhare.
Maitiro Ekumbomira iCloud Photo Raibhurari Mhedzisiro
Nhasi tinokuudza maitiro ekumbomira kuvandudza kuICloud Photo Library yako paIOS neMac kana uchingova nekubatana nhare
Isu tinokuudza maitiro ekurodha pasi ma ringtone e iPhone mahara kana kugadzira mimhanzi yako kubva kunziyo dzaunonyanya kufarira.
Zvese nezve iyo nyowani iOS 11 Control Center
Isu tinoongorora imwe yeakakurumbira matsva eIOS 11 ye iPhone nePadad: iyo nyowani Control Center ine yayo sarudzo maitiro
Ungade here kutumira nziyo kana kuponesa idzo dzinogamuchirwa kubva kuWhatsApp? Ndekupi kuri WhatsApp audios akachengetedzwa pa iPhone? Zvakanaka pinda uye uwane zvese!
Isa iyo iPhone muDFU Mode
Dzidza maitiro ekuisa iyo iPhone muDFU modhi yekudzorera kana kana yako iPhone yakavharwa uye isinga pfuure pechidzitiro cheapuro.
Isu tinokuudza maitiro ekudzoreredza iyo iPhone uye nhanho dzekuteedzera kumisikidza iyo iPhone ne iTunes kana isina iTunes kuti uisiye kubva kufekitori.
Tsvaga maitiro ekurodha pasi mavhidhiyo epaFacebook pa iPhone uye nezveappi yaungashandisa kuwana mavhidhiyo. Ngaparege kuva nechinhu chinokutadzisa kutora mavhidhiyo epa Facebook
Chii chatinofanira kuita kana yedu iPhone kudzima kamwe kamwe
Aya ndiwo matanho ekutevera kana yako iPhone ikadzima yega uye kuti iwe unofanirwa kuedza usati watora iyo kuitira sevhisi. Nei nhare yangu ichidzima kamwe kamwe?
Maitiro ekudzima maapplication uye chengetedza nzvimbo pane yako iPhone kana iPad
Kana iwe uchida kuchengetedza nzvimbo yekuchengetera pane yako iPhone uye iPasd, nhasi tinokuudza nezvenzira dzinoverengeka dzekudzima maapplication ausingachashandise
Maitiro ekuona nekugovana Apple Music playlists neshamwari dzako
Nekusvika kweIOS 11 (ikozvino yave kuwanikwa mune yeruzhinji beta vhezheni), iyo yekumhanyisa mimhanzi sevhisi Apple ...
Maitiro ekuisa iOS 11 Veruzhinji Beta 1 pane yako iPhone kana iPad
Tsvaga maitiro ekuisa iOS 11 Veruzhinji Beta pane yako iPhone kana iPad mushure mekutanga kwekutanga yeruzhinji Beta vhezheni yeIOS 11.
Maitiro ekuisa iOS 2 beta 11 mahara pasina account yekuvandudza
Kana iwe uri kufa kuti uyedze nhau dzeIOS 11 beta 2, nhasi tinokuudza maitiro ekuiisa pane yako iPhone kana iPad yemahara pasina kuve mugadziri
Sei kutenderera vhidhiyo? Isu tinokuudza maitiro aunga shandura maitiro ayo kubva ku iPhone kana iPad neiyi sarudzo yeapplication yausingakwanise kupotsa.
Maitiro ekuridza PlayStation 4 pane yako iPad yekutenda kuR-Play
Mune maApple News tutorials nhasi tiri kuzokuudza zvishoma kuti tingatamba sei PlayStation 4 pane yako iPad nekutenda kuR-Play.
Maitiro ekudzima yedu Facebook account nyore
Isu tinokuratidza maitiro ekudzima zvachose iyo Facebook account. Pinda kana iwe uchida kudzima yako profile kubva kune ino saiti network kana uchida kuziva kuzviita.
Maitiro ekuti utarise zvinyorwa muIOS 11 neApple app
Kutenda kune idzva basa reNotes kunyorera neIOS 11, tinogona kuverenga zvinyorwa zvakananga tisina kushandisa chechitatu-bato kunyorera.
iOS 11 inobvumidza iwe kuti uwedzere kubata kwekubata kuAirPods zvakazvimiririra kune yega headset, uye inoshanda neIOS 10. Tinotsanangura kuti sei.
NaIOS 11 tinogona kupindura nhare otomatiki mushure memasekonzi mashoma
Zvishoma nezvishoma uye sevanogadzira vari kuongorora ins uye kubuda kweIOS 11, muActualidad iPhone tiri kukuzivisa ...
Sei kunyora kwako iPhone sikirini
Unoziva sei kunyora kwako iPhone sikirini? Isu tinotsanangura nzira dzese dziripo kuti uzviite: kuburikidza neWiFi, netambo, paWindows, Mac, kubva kuIOS 11 ...
Isu tinotsanangura maitiro ekugadzirisa iCloud Keychain, mashandiro ayo, dhata ripi raanochengeta uye zvese zvaunoda kuti uwane zvakanyanya mairi
Natsiridza mashandiro e iPhone yako nemaitiro akapusa aya
Mugovera unofadza! Iyo inoshanda sisitimu ye iPhone, iOS, haisi system iyo inokanganisa kudzikamisa mashandiro ayo nezvakawanda ...
Maitiro ekupinza kutaurirana kune iPhone
Isu tinokuudza maitiro ekuisa mafoni kune iPhone kubva kuGmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Windows, iTunes uye nezvimwe. Chinjana karenda yako kuiyo iPhone nenzira yakapusa
Maitiro ekuteerera kumimhanzi neApple Watch
Isu tinotsanangura kuti ungateerera sei mimhanzi neApple Watch yako, maitiro ekuchinjisa mimhanzi kuApple Watch uye ndeapi mahedhifoni aunogona kushandisa
Maitiro eku zoom mukati pane mafoto pane iOS pasina jailbreak
Paunenge uchitora mifananidzo, zvinogara zvichikurudzirwa kuti uswedere padyo nenyaya yacho kuti udzivise kuita zoom yedhijitari ne ...
Sei Export Contacts kubva iPhone
Isu tinotsanangura nzira yekuendesa kunze mafoni kubva kune yako iPhone kuenda kune mamwe masevhisi (gmail, iCloud ...) uye mamwe majaira (Android, Windows, Mac) Gwara rakazara kwazvo!
Chii chiri uye sei chishuwo chinyorwa chinoshanda pane iOS?
Tinokuratidza zvese zvatingaite neIOS runyorwa runyorwa uye kuti chii chaicho chishandiso chiri
Maitiro Ekubvisa Kutarisisa Kutsvaga Nhoroondo pane iPhone
Kuremadza nhoroondo yekutsvaga inzira yakapusa inobvisa chero kutsvagurudza kwatakaita pane iyo iPhone.
Maitiro ekuvharira mafoni kubva kune asingazivikanwe uye akavanzika manhamba efoni
Isu tinokuratidza hunyengeri hwaungavharira nhare dzese kubva kune asingazivikanwe uye akavanzika manhamba efoni.
Sunungura kumusoro nzvimbo pane yako iPhone nekukurumidza neichi chekare hunyengeri
Zvese izvi zvinogona kusiiwa kumashure kana iwe ukafunga hunyengeri hunonakidza hwave huripo muIOS kwenguva yakareba uye hungakuchengetera nzvimbo.
Maitiro ekumisikidza kudzora kwevabereki pane iyo Nintendo Chinja
Iyo Nintendo switchch ine yakakwana kukwana kune edu efoni anotibvumidza isu kudzora mashandisiro anoitwa nevana vedu paconsole.
Mashandisiro aungaita "Kurara" basa reako iPhone alarm
Chinhu chakakosha ikozvino kuziva kuti "Kurara" mashandiro eIOS anoshanda sei, uye kana ichizonyatsotibatsira kurara zvirinani.
Maitiro ekuona uye kugadzirisa epasiridzi mapassword akachengetwa muSafari
Kuona nekugadzirisa mapassword ewebhusaiti akachengetwa muSafari iri nyore kwazvo. Muchidzidzo ichi tinokuratidza maitirwo azvo.
Maitiro ekudzidzisa yako iPhone kana iPad kuziva zviso zveshamwari dzako
Tinoda kukudzidzisa kubva ku iPhone News kuti udzidzise yako iPhone kana iPad maitiro ekunyora mifananidzo zvichienderana nekuti ndiani anoonekwa mavari.
Maitiro ekudzima mukati-app ratings pane iPhone uye iPad
Tiri kuzokuratidza maitiro ekudzima iyo ye-mukati ratings ficha pane yako iPhone kana iPad.
Maitiro ekudzima voicemail yekambani yako
Tsvaga maitiro ekudzima voicemail yekambani yako zviri nyore: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, MásMóvil, Lowi, Pepephone uye nezvimwe.
Wanga uchiziva here kuti iwe unogona kushandura zita reApple Watch yako? Maitiro ekuzviita
Iyo Apple Watch haifanire kuchengeta zita iri parunhare nekusingaperi, unogona kuchinjira kune chaunofarira uye pese paunoda, nhasi tinokuratidza kuti sei.
Chii chinonzi AirDrop?
Isu tinokuudza kuti chii chinonzi AirDrop, kuti inogadziriswa sei uye kuti inoshandiswa sei kugovera mafaera pakati peIOS neMacOS. Iwe unoziva here kushandisa imwe yeakanakisa mashandiro eiyo system?
Nei zvichikosha kuti uchengete iPhone ports yakachena uye kuti ungazviita sei
Iyo iPhone yakagadzirirwa kuve yakanaka, kunyange hazvo chokwadi chiri icho chazvino chakanaka J. Ive kwete ...
Mashandisiro Ekushandisa Apple clip Kuita Kuti Unakirwe, Anoshamisa Mavhidhiyo
Tine dzidziso huru pane izvo maFicha maficha uye nemabatiro aungaita mafaro uye echokwadi zvemukati nazvo.
Maitiro ekuti uwane zvimwe zvakawanda zoom muMifananidzo kubva kune yedu iPhone
Uku kunyengera kudiki kuchazotibatsira kuwedzera mapikicha atinawo muraibhurari yedu ye ...
Maitiro ekudzivirira ako iCloud account kubva pakurwiswa uye hackers
Isu tinotsanangura matanho makuru ekuchengetedza atinofanira kuteedzera kudzikisira njodzi yekuti mumwe munhu agone kuwana yedu iCloud data
Maitiro ekuvhura vhidhiyo kubva kuSafari kana WhatsApp zvakananga paYouTube
Nhasi tinoda kukuratidza maitiro ekuvhura vhidhiyo kubva kuSafari kana WhatsApp yakanangana neYouTube kuti tikwanise kushandisa mikana yayo yese.
Maitiro ekuteedzera Zvekuziviswa zveBasa kubva kushamwari dzako
Kugovera chiitiko chako neshamwari kunobatsira iwe kuzadzisa zvakakwirira uye zvepamusoro zvinetso, asi zviziviso zvinogona kutsamwisa
Maitiro ekuchengetedza hupenyu hwebhatiri neApple Watch
Isu tinotsanangura mamwe matipi akareruka ayo achakubatsira kumanikidza iyo Apple Watch bhatiri zvishoma zvirinani, kuwana mamwe mashoma maawa enguva.
Maitiro ekudzoreredza backup pane yako Apple Watch
Isu tinotsanangura kuti tingachengeta sei ruzivo rwese paApple Watch yedu kuti tiitorezve mushure mekudzoreredzwa, kana kuchinjisa kune imwe nyowani
Mashandisiro aungaita WhatsApp statuses: maitiro ekushandisa iro basa
Gara uye unakirwe negwara redu nezvose zvaunoda kuti uzive nezve WhatsApp Status, chayo chitsva uye chinoshamisa chimiro.
Maitiro ekudhinda zvinyorwa kubva kune yako iPhone kana iPad
NaIOS 10 uye neAirPrint chishandiso tinogona kupurinda zvinyorwa, mapikicha uye mapeji ewebhu kuburikidza ne iPhone yedu nePadad pasina tambo.
Isa WhatsApp ++ pane iOS 10 uye pasina Jailbreak
Tinokuunzira imwe nzira isina Jailbreak kuenda kuWhatsApp, inonzi WhatsApp ++ uye inobvumidza iwe kuwedzera mabasa matsva uye marongero
Maitiro ekududzira uye kutsanangura mazwi pane iOS pasina wechitatu-bato maapplication
Iwe unoda kutsanangura kana kushandura mazwi kubva ku iPhone yako uye haudi kushandisa chechitatu-bato maapplication? Izvo zvinogona kuitwa, uye mune ino posvo isu tinotsanangura kuti sei.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve ngano: vimba iyi komputa?
Isu tese takaona mubvunzo kuvimba nekomputa iyi? pane chimwe chezvigadzirwa zvedu, tinotsanangura zvazvinoreva uye kuti zvinoshanda sei
Maitiro ekugovana yako screen skrini neshamwari dzako
Parizvino pane maturusi mazhinji uye echinyakare zvikumbiro zvekugovana chidzitiro cheDevice yako kana Mac nemamwe maApple maApple
Maitiro ekumanikidza kuvhara Apple Tarisa maapplication muWatchOS 3
Uri kusangana nedambudziko neapp here pane yako Apple Watch? Mune ino posvo isu tinokudzidzisa iwe kumanikidza ekuvhara kunyorera muwatchOS 3.
Apple Kuona uye Chiitiko, makiyi ekuzvinzwisisa
Isu tinotsanangura kuti iyo Apple Watch inokodzera sei chiitiko chedu chemuviri uye izvo zvinangwa zvezuva nezuva izvo zvainoisa patiri zvinoreva kunzwisisa mashandiro ayo.
Maitiro ekuvandudza kuzvitonga kwakashata kweyako iPhone 6s
Mu iPhone News nhasi tiri kuzokupa mamwe matipi madiki ekuwedzera kuzvitonga kwakashata kwema iPhone 6s.
Isu tinotsanangura kuti kubatana kweApple Watch neiyo iPhone kunoshanda uye kuti ingavandudzwe sei uchishandisa 5GHz network zvisinei nekukanganisa kweiyo wachi
Maitiro ekushandura mapeji ewebhu muSafari yeIOS pasina kusiya browser
Kududzira mapeji ewebhu kubva kune mimwe mitauro neSafari kuri nyore kwazvo nekutenda kune yemahara Microsoft Translator application
Yalu, iyo iOS 10.2 Jailbreak, yave kuwanikwa
Yalu 102 yave kuwanikwa kuisa Cydia pane iOS 10.2 pamidziyo yakatsigirwa. Isu tinotsanangura maitiro ekuzviita nhanho nhanho
Maitiro ekunakidzwa neIOS 10.2 emoji pane iOS 9 [Jailbreak]
Iwe unosuwa chero iOS 10.2 emoji yekuve pane vhezheni yeIOS 9? Muchikamu chino tinokuratidza kuti ungashandise sei kana iwe uine jailbreak.
Maitiro ekugovana mapikicha nevanhu vazhinji kubva kune yako iPhone
Iyo dzakasiyana gore rekuchengetedza masevhisi anotibvumidza isu kugovana mafoto nevamwe vanhu zviri nyore kwazvo
Yangu iPhone inogamuchira asi haitumire maemail. Zvandinoita?
Chii chandinoita kana yangu iPhone ichigamuchira asi isingatumire maemail? Mune ino posvo tinokuratidza zvaunofanirwa kuita mune yeMessage application.
Yangu iPhone inoratidza iwo meseji "Isisiriyo SIM". Ndinozvigadzirisa sei?
Wati waona meseji "Isiriyo SIM" pane yako iPhone skrini? Usanetseke. Mune ino posvo tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive.
IPhone isina sevhisi? Edza izvi mhinduro
Isu tinokuratidza zvaunogona kuita kana yako iPhone ikarasikirwa nekuvhara uye ikamhanya kunze kwechiratidzo nekuratidzira HAPANA SERVICE chiziviso. Chii chinoitika kune yako iPhone?
Maitiro ekuparadzanisa mahedhifoni eBluetooth neako Apple Watch
Iwe unoda kubatanidza mahedhifoni eBluetooth neako Apple Watch uye usingazive pekutangira? Mune ino posvo tinotsanangura izvo zvaunofanira kuziva.
Nei yangu skrini ye iPhone ichidzima pandinoita runhare?
Iyo iPhone skrini inodzima pandinoita runhare. Zvakajairika? Mune ino posvo tinotsanangura zvese zvaunoda kuti uzive.
Maitiro ekugadzirisa matambudziko ezwi paAirPods uye Beats Solo 3
Wakave uine matambudziko anonzwika neAirPods? Isu tinokuratidza mhinduro dzese dzinogoneka kuti tigadzirise zvinokanganisa ruzha rweAirPods.
Kufona kubva kune imwe iPhone kunorirawo pane imwe. Chii chirikuitika?
Kune mafoni kubva ku iPhone inorira pane imwe iPhone panguva imwe chete? Edza mhinduro dzatinopa mune ino posvo.
Mashandisiro ekushandisa Dialing ficha mu Mifananidzo app yeIOS 10
Wanga uchiziva here kuti kubva kuIOS 10 tinogona kugadzira zvimwe zvekutanga zvemifananidzo yedu? Mune ino posvo tinotsanangura mashandisiro Ekudaidzira kubva kuApp Photos.
Maitiro ekugovana Rarama Mapikicha pa Instagram Nhau
Isu tinokuratidza maitiro ekugovana Mapikicha Mapikicha pa Instagram Nhau, ichangoburwa mune yekuvandudza yemafashoni social network, Instagram.
Maitiro ekutarisa kana mutengesi achibvuma kubhadhara neApple Pay
Iwe unotova nekadhi rinoenderana neApple Pay asi usingazive kana uchigona kurishandisa mune imwe chitoro? Mune ino posvo tinokuratidza maitiro ekuziva.
Tinokuunzira mhinduro inogoneka kuchinetso chebhatiri reAirPods bhokisi
Tiri kuzokuratidza mhinduro inogoneka, kunyangwe iri yenguva diki, yekudonhedza bhatiri kubva kuAirPods kesi.
Wakafirwa here yako iPhone? Tungamira kukiya kana kuwana yako yakarasika iPhone
Isu tinoendako nezano rekutanga uye matipi ekudzosera edu Apple iPhone zvishandiso.
Mukudzidzisa kwanhasi tichave tichikudzidzisa maitiro ekudzima maviri-chinhu chokwadi pane yako Apple ID.
Zvinhu zvishanu zvaunogona kuita neako Apple Watch uye AirPods
Iyo Apple Watch ndiyo inokwenenzvera kune edu maAirPods, tinokuratidza zvinhu zvishanu zvaunogona kuita neApple wachi uye mahedhifoni.
Maitiro ekudzima yako Super Mario Mhanya data pasina kudzima mutambo
Masikati ano muApple News isu tichaenda kukudzidzisa iwe kudzima yako Super Mario Run data pasina kudzima mutambo.
Dzidziso kune jailbreak iOS 10 neYalu uye Cydia Impactor
Muchidzidzo ichi tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive jailbreak iOS 10 ne yalu jailbreak uye Cydia Impactor.
Zvikumbiro zvekutora mavhidhiyo eYouTube
Nhasi tinokuunzira akanakisa mafomu ekurodha pasi mavhidhiyo eYouTube kuitira kuti ugone kuzvichengeta zvese pane yako iPhone uye nemamwe marudzi emidziyo.
Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 10.2 kuenda kuIOS 10.1.1 yeinogona kuitika jailbreak
Runyerekupe ruri kurira kuti kuchave nekuputsika kwejeri kweIOS 10.1.1 munguva pfupi, saka iko kudzikisira kwakakosha. Tinotsanangura kuti sei.
Maitiro ekuwana Luigi, Toad, Yoshi uye Toadette muSuper Mario Run
Ungaita sei kuti uwane mamwe mavara muSuper Mario Run, isu tinotaura nezvaYoshi, Toad uye Princess Peach pakati pevamwe.
Mashandisiro ekushandisa iyo nyeredzi system muMumhanzi muIOS 10.2
Nyeredzi nyeredzi dzeMusic app dzadzoka nekusvika kweIOS 10.2. Mune ino posvo tinokuratidza maitiro ekushandisa ino system.
Maitiro ekuchinjisa ruzivo kubva kuangu iPhone kuenda kune Android smartphone nenzira yakapusa
Apple yakatangisa makore mashoma apfuura chikumbiro muGoogle Drive icho chinotibvumidza isu kuendesa ruzivo kubva kwedu ...
Maitiro ekudzima VoiceOver kana iwe ukaibatidza netsaona
Ko yako iPhone inotaura newe pazvisingafanirwe? IPhone yako haisi kupindura? Chidzitiro hachitsvedza? Unogona kunge uine VoiceOver yakavhurwa. Isu tinotsanangura maitiro ekuimisa.
Matipi uye matipi eapo Candy Crush isingatakure
Candy Crush hairegi! Ndiko kuguma kwenyika! Zvandinoita? Muchikamu chino iwe une akati wandei matipi uye manomano ekuti kana mutambo unozivikanwa wafunga kusaisa